Booliska Kenya oo Xabsiga dhigay Soomaali Argagixiso iyo Budhcad-badeed lala xidhiidhiyay | Xarshinonline News
Booliska Kenya oo Xabsiga dhigay Soomaali Argagixiso iyo Budhcad-badeed lala xidhiidhiyay
Posted by xol2 on March 27, 2010 · Leave a Comment
Nairobi, (NNN)- Ciidanka ammaanka dalka Kenya, ayaa xabsiga u taxaabay Soomaali looga shakiyay inay ka tirsan yihiin Argagixisada.
Siday faafisay wakaalada wararka ee AP, Soomaalidan Kenya xidhay oo saddex nin ka kooban, waxa uu Boolisku gacanta ku xidhay xilli ay saarnaayeen diyaarad caawimo siday oo ay doonayeen inay ugu socdaalaan Soomaaliya. “Saddexdan qof ee laga shakiyay, waxa su’aalo laga waydiinayaa dhaqdhaqaaqooda ay doonayeen inay dalka ka bilaabaan, waxaana laga baadhayaa inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqyada Argagixisada,” ayuu yidhi sarkaal ka tirsan Booliska Kenya. “Ma jiraan eedaymo gaar ah oo saddexdooda ka dhan ah, laakiin baadhis uun baa lagu hayaa,” ayuu raaciyay.
Madaxa ciidanka Booliska ee la-dagaalanka Argagixisada Mr. Nicholas Kamwende, ayaa xaqiijiyay xadhiga saddexdaa nin ee Soomaalida ah, balse waxa uu diiday inuu wax faahfaahin ah ka bixiyo.
Saddexdan nin waxa ka mid ah Saleebaan Ciise oo haysta dhalashada Maraykanka, sida la sheegayna ku jira liiska kooxaha Argagixisada, iyadoo labada kalena kala yihiin, Axmed Cali Xasan oo sita dhalashada Kanada iyo Maxamed Xusseen Xaashi oo haysta dhalashada dalka Kenya, kuwaasoo haatan su’aalo lagu waydiinayo xarumaha qaybta la-dagaalanka Argagixisada ee Booliska Kenya.
Dhinaca kale, Ciidanka Kenya ee xeebta jasiirada Lamu, ayaa xidhay 11 qof oo lala xidhiidhay Budhcad-badeeda Soomaaliya, kuwaasoo markii u horaysay Axaddii lagu xidhay biyaha dalkaas, ka dib markii ay ku guuldaraysteen isku-day la xidhiidha afduubka Doon nooca kalluumaysiga ah.
Filed under gobolka
← Rabaso: Jabhadda ONLF oo laysay dhalinyaro reer Somaliland ah
Xukuumadda M/weyne Rayaale oo ka hadashay in Dawladda Israa’iil aqoonsanayso Somaliland →